Abyssinia, boqortooyada Negus - Afrikhepri Fondation
Abyssinia, boqortooyadii Negus
Lwuxuu dusha ka saaray plateau bartamaha Itoobiya wuxuu u suurta galiyay boqortooyooyin masiixiyiin ah inay iska caabiyaan qarniyo badan duullaanadii ka dhacay Geeska Afrika Taariikhda gobolkan, oo loogu yaqaanay Masar hore "dhulkii Punt", waxaa lagu calaamadeeyay afgambi, dilal iyo dhagarta qasriga.
Dadkii ugu horreeyay ee deggan Itoobiya waxay xiriir la lahaayeen dadka ku nool Nubia. Miilaadigii XNUMXaad ee Miilaadiga, soo haajirayaashii ka yimid Yemen waxay degeen inta u dhexeysa xeebaha Badda Cas iyo harada Tana. Mid ka mid ah qabiilooyinkooda, oo ah Habashas, ​​ayaa magaceeda u bixiyey Abyssinia oo boqortooyadii Aksum ayaa ugu dambayntii adkaatay.
Aksum wuxuu ahaa awooda ugu weyn ee gobolka markii boqorkeedii, Ezana (AD 320-342), uu qaatay diinta kiristaanka. Axumiyadu waxay xukumayeen Badda Cas waxayna safaro ku tageen Carabta. Waxay xiriir wanaagsan la yeesheen bariga fog.
1504, boqortooyada Aloa, oo kahadashay boqortooyooyinkii Nubia ee Masiixiyiinta, waa inay u dhiibto cadaadiska Muslimiinta. Kaliya Abyssinia ayaa is hortaagtay, iyada oo gabaad ka dhigatay godkeeda buuraleyda ah. Laakiin ciidamadii duullaanka ahaa ee uu hogaaminayay Imaam Gragne oo ay sii xoojiyeen imaatinka Turkida ee Badda Cas waxay burburiyeen gobolka. Imbaraadoorkii Kalawdiyos wuxuu markaa caawimaad weydiistay Bortuqiiskii oo gawaaridiisu ay hadda soo galeen Badweynta Hindiya. Dagaalku markuu dhammaaday, ciidammadii Imaam Grange waxay ku khasbanaadeen inay ka baxaan dhulkaas, Burtuqiiskuna waxay degeen Abyssinia.
In 1632, wadaadada Coptic waxay kor u qaateen dadweynaha Abyssiniyaanka, waxay ku qasbeen asxaabta (boqorka) Sousneyos in ay afduubaan una diiddaan Xeerarka Boortaqiiska.
Wiilkiisa Fasilidas (1632-1667) wuxuu caasimad u dhisay Gonder, waqooyiga harada Tana. Diblumaasi xirfad yaqaan ah, wuxuu xiriir lasameeyay dadka Turkiga ah, ee sayid ka noqday badda Mediterranean, iyo Mogul-kii weynaa, oo awooddiisu ku baahday Hindiya inteeda badan.
Fasiilidas iyo guusheegrayaashiisa ayaa Gondar ku kobciyey dhiriryo dhisay oo qurxiyey Hindiyeyaasha iyo Carabta.
Wuxuu ahaa Menelik, boqorka Choa (waa gobol ku yaal koonfurta harada Tana) oo dhisay Itoobiya casri ah.
Markii loo aqoonsaday inuu yahay negus sanadkii 1889, wuxuu dhisay boqortooyo isagoo ku darsaday dhowr gobol oo ka tirsan Geeska Afrika iyo inuu dhisay Addis Ababa (ubaxii cusbaa), caasimad cusub, kana fog Abyssinia iyo qorshaheeda. Wuxuu dhintay 1913 isagoo isku dayay wax walba si looga hortago in boqortooyadiisa la gumeysto.
8 cusub laga bilaabo € 8,00
7 waxaa laga isticmaalay € 12,07
Iibso € 8,00
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 23, 2020 9:31 am
Afrostream, oo ah madal soo bandhiga filimada loogu talagalay Afro-farcankiisa
Qaamuuska asalka magacyada iyo naaneystayaasha dalalka Afrika - Arol Ketchiemen